Lena okokufundisa elula mayelana nendlela ukuguqula i-DVD ukuze MP4 format. Uma ufuna ukujabulela intandokazi DVD movie akho namadivayisi akho ephathekayo, Ngikholelwa incwadi echazayo Yilokho okudingayo.
Njengoba sazi, MP4 iyashesha iyahambisana amadivaysi popular ephathekayo njengo iPhone, iPod, iPad, Amafoni Android, Umlilo Kindle, njll. Lapho wenza ukudabuka DVD ukuze MP4 video format kanye nokudlulisela kumakhalekhukhwini noma amaphilisi, a DVD Ripper enkulu nge emihle kakhulu okuphumayo video quality kungakwenza lokhu ukuguqulwa baba injabulo enkulu nangokwengeziwe. Ngakho ngaphambi kokuqala ukuguqulwa, I batusa lokhu DVD ukuze MP4 Converter waklebhula movie yakho MP4.
Indlela ukuguqula DVD ukuze MP4 ne ibhuleki lesandla
Ibhuleki lesandla iyi-edumile ithuluzi omuhle khulula video Converter. Ngalo, wena kalula ukuguqula i-DVD non-evikelwe kuya MP4 noma MKV yohlelo.
Step 2: Ngenisa DVD by ngokuchofoza “Umthombo” -> “Vula Ifolda”, ke ukhethe DVD yakho.
Step 3: Dlulisa amehlo bese ukhetha uya khona endleleni ifayela aguqukile MP4.
Step 4: Khetha MP4 in the Izilungiselelo lokukhipha. Noma ungakhetha ezinye Preset on ilungelo ithuluzi.
Step 5: Chofoza “Qala” bese ulinde inqubo baguqula isiqedile.
Indlela Rip DVD okuvikelwe MP4 ne Isiqophi Converter Ultimate
With ibhuleki lesandla, ungakwazi ukubhekana nezimo kakhulu. Kodwa abe buthakathaka in DVD okuvikelwe. Kulokhu, udinga ukusebenzisa nezinye software amanye DVD Ripper, like WinXDVD (Bheka futhi: Best 7 Free DVD Rippers Futhi Top 5 Mac Free DVD Ripper ).
Lapha sisebenzisa Isiqophi Converter Ultimate ukuba kufundiswe.
Step 1: Umthombo Ngenisa DVD
Faka DVD disc zibe DVD yakho drive bese uchofoze the “Umthwalo DVD” inkinobho ukulayisha DVD.
Step 2: Khetha iphrofayli okukhipha
Chofoza futhi akhethe MP4 in the izilungiselelo lalilinganiselwa on ilungelo the window.
Khetha okukhiphayo indlela ividiyo ifayela aguqukile. Bese Chofoza the ezinkulu “Ukuguqula” inkinobho ukuqala baguqula DVD ukuze mp4 futhi emfushane ngenkathi ziyoqedwa. Ngemuva ukuguqulwa, ungathola amafayela video ngokushesha nge ngokuchofoza “Vula Ifolda”.
Posted on July 15, 2014 May 9, 2015 Umbhali WillIzigaba Video / Audio SolutionAmathegi best free DVD Ripper, DVD ukuze mp4, Ibhuleki lesandla
Langaphambilini post Previous: Nendlela ehlisa iOS 8 beta ku-iOS 7.1.1
Next post Next: Nendlela Vumela USB lokulungisa inkinga kudivayisi yakho Android